Twin Seoul ayaa martigelin marxaladda labaad la "tijaabo" waa
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Twin Seoul ayaa martigelin marxaladda labaad la "tijaabo" waa
From aqrinayo hab
mataanaha Seoul heli [3500 yen qiimaynta Free] a derjada dhabta ah, marka aad isku daydo in mid ka mid ah nafta mar kale ku soo laabto, waxa la sheegay in si aad u hubiso inay dhex maraan toddobadii marxaladaha. In marxaladda ugu horeeyay ee la aqoonsado kasta oo kale, iyo weydiimaha si xoog leh iyo ruuxa baraaruga, laakiin la soo dhaafay markii ay marxaladda loogu yeedhi doonaa "tijaabo" ee marxaladda labaad.
Tani waxaa la sheegay in ay ugu horeysay in ay u muuqdaan dhibtani ku maraya toddobadii marxaladaha. Marka la soo dhaafay dareenka ruuxiga ah, marxalad ka fool dhibaatada dhabta ah waa marxaladda labaad. The "tijaabo", halka ogaada in aad soo jiitay in midba midka kale si xoog leh in midba midka kale, waa in ay la tixgelinayo dhibaatada dhabta siiyey mid ka mid ah dhibtani sida in la sii wado si ay marxaladda soo socota.
ilaa iyo haatan sababtoo ah waa laba qof kuwaas oo u yimid nolol aad u kala duwan, ma aad awoodi doonaan in ay ka mid sidaa si fudud xataa nafta dhigiisa noqon. Ilaa hadda of ego la beerayaa kasta nolosha, in niyad doonaa kusiga ah inuu ka tago dareenka ah in la helaa in marxalada koowaad.
at markii ugu horeysay ee dhibtani ku
? waayo-aragnimo iyo marxaladda labaad ee aqoontu waa Kaowodasu
mataanaha Seoul Twin Seoul kasta oo waayo-aragnimo jacaylka waa ku soo rogeen, baraaruga ruuxi ah oo la soo maray marxalada koowaad waa la illoobay Waxaa heli doontaa. Tani waa, ka badan in naftu waa midba midka kale wac, u waayo-aragnimo iyo aqoon helay taas oo uu ku noolaa in haatan waa in mashquulin xooga ee dareenkooda.
? iyo in uu ku guuldareystay in jacaylka in aan soo maray
abid jecel helay imprinting ah oo jidka this, noqon addoonkaaga joogo sida kuwa xeerarka ay ku soo rogeen on iyaga u gaar ah by waayo-aragnimo ah Xiang. Sidaas si la hadasho, waana waxa uu baaqi ku maanka si imprinting sida. Dareen in kasta oo kale oo soo jiidan si xoog leh in midba midka kale in
ee Marxaladda koowaad, waxaa libdhi doonaa by xusa imprinting this. Markaas, aad canbaareen karaa in xisbiga kale ee ku saleysan imprinting ah, sidoo kale Movement, sida ama ka walaaca dhadhamiyey ee la soo dhaafay jacaylka halaagsameen haysta dareen ah xaasidnimo iyo tuhun in ka soo bixi doonaan.
? ego iska caabinta ka dhanka ah waxaa la beerayaa
waayo-aragnimo ee la soo dhaafay ego adag aan loogu tala galay in lagu tirtiraa daawada si fudud u. Aad u badan oo in lagu xidho by ego, ma waxaad awoodi doontaa inaad si loo yareeyo masaafada u dhexeysa nafta mataano. By marxaladan, waa inay dareemaan markii xanuun ugu horeysay ee waa feature weyn ee marxaladda labaad.
naf mataano ah midba midka kale, in haddii ay ka gudbaan karaa dhibka ay ku adkaada marxaladdan labaad waxaa la tuuraa mustaqbalka ee muhiimka ah
uu ego, ayaa la badanaa adag. Sidaa aawadeed, nafta oo mataano ah oo walaac xoog leh iyo dhibaato in marxaladda soo socota, oo aad inta badan la kulmi doonaan kala.
dhif ah, welwel iyo rafaad in ay nadiifiso dhibtani ee marxaladda labaad, laakiin waxa aad u sii wadi laga yaabaa in marxaladda of it on aan sarre ku saabsan kala go'a ee masraxa, waxa uu noqon lahaa wanaagsan in aan la filan oo aad u badan. Haddii aan laga gudbi dhibtani ku, waxaa loo qaadan doonaan in ka badan in ay marxaladda soo socota.
Waxaa laga yaabaa in marxaladda of it on aan la labanlaabo on di ah, laakiin ay u badan tahay waa in aan wax badan ka filayaan. Haddii aan laga gudbi dhibtani ku, waxaa loo qaadan doonaan in ka badan in ay marxaladda soo socota.